Qofna kuma doodi karo taas LinkedIn waa barta internetka ee shabakadda isku xirnaanta bulshada ee ganacsiga ku saleysan. Xaqiiqdii, kama aanan eegin resume ku lifaaqan murashax kumana cusbooneysiin dib-u-cusboonaysiinteyda muddo toban sano ah tan iyo markii aan adeegsaday LinkedIn. LinkedIn kaliya iima ogola inay aragto wax kasta oo resume ah ay qabato, laakiin sidoo kale waxaan baari karaa shabakada musharaxa oo aan arki karaa cida ay la shaqeeyeen iyo - ka dibna la xiriir dadkaas si aad wax badan uga ogaato.
Dabcan, maahan oo keliya ilaha shaqo-doonka iyo qandaraasleyaasha… sidoo kale waa keydka ugu ballaadhan ee meeraha ee la-hawlgalayaasha macdanta iyo rajada sidoo kale, gaar ahaan haddii aad geynaysid Suuq-Ku-saleysan Xisaabeed Istaraatiijiga.
Reply waa multichannel madal hawlgelinta iibka taas oo otomatig ka dhigaysa wacyigelinta emaylka shaqsiyadeed, wicitaanada, iyo shaqooyinka, halka Iibintu ay diiradda saari karto waxa runta muhiimka ah - xidhitaanka heshiisyada Waa kuwan fiidiyow muuqaal guud ah:
Kordhinta LinkedIn Chrome - Raadi emailada ganacsiga ee rajada 'LinkedIn' oo kor u qaad wax soosaarkaaga Jawaab Kordhinta Chrome. Hawlahaaga maalinlaha ah iyo awooda aad ku xidhiidhi karto adoo adeegsanaya LinkedIn, emayllada iyo codka marwalba waa la gaari karaa.
Astaamaha Iibka Smart - Aasaasida AI-taageerto Leverage Reply ee AI si aad ula macaamisho rajadaada si kafiican oo dhaqso badan - oo ay kujirto kala soocida emaylka sanduuqa, hubinta tayada, iyo soo jeedimaha, talaabooyinka la soo jeediyey iyo baaqyada la soo jeediyey ee rajada kulul.
Tags: wac wacyi gelincadeyncontactcloudnaxaas crmdatanyzeraadinta emaylkaansaxinta emaylkaXiriir buuxahubspotLinkedInxiriirinta fidintamadkudusuuq geyn dibedda ahiibinta dibaddaxamaalJawaabmaaraynta xiriirka iibkahawlgelinta iibkamadal hawlgelinta iibkagaadhsiinta iibkawarbixinta iibkaiibinzapierzoominfo